यो सन्दर्भ सरकारको आलोचना हुँदै होइन । मैले जे जति विषयहरु उठाएको छु, ति विषय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, मान्यता, निर्णय, घोषणा र नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा गर्न गरिएका जोड हो । यसलाई पार्टीको सैद्धान्तिक, नीतिगत अवधारण र मान्यताको प्रतिरक्षाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जस्तो उदाहरणको लागि नागरिकता विदेशीहरुले पाउनुहुन्न, नेपालीहरुले मात्रै पाउनुपर्छ र नागरिकता जस्तो विषयमा खुकुलो बनाएर भारतले हाम्रा चेलीहरु बिहा गरेर गएपछि निवेदनका लागि सात वर्ष पर्खाउँछ । हामीले भने तुरुन्तै दिने र मन्त्री बनाउने जस्तो खुकुलो प्रणाली अपनाउनु हुन्न भन्ने कुरा त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य अनुरुप त्यसको प्रतिरक्षा गरिएको कुरा न हो । त्यस्तै बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरुको भर्ति हुनुहुँदैन भनेर मैले भनेको छु । किन सुरु गरियो ? भनेर मैले भनेको छु । यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि निरन्तर पार्टीले लिएको अडान हो । त्यसैले मैले बोलेका कुराहरु यो पार्टीको मान्यता, सिद्धान्त, हित र देशको हित र नेपालको संविधान अनुकुल छ । यो कुरा गर्दा कसैको आलोचना हुन्छ भने सम्वन्धितले अलिकति त्रुटी गरेछौं की भनेर सोच्नुप¥यो । हेर्नुप¥यो, फर्किएर समिक्षा गर्नुप¥यो ।
हो, मैले पनि हिजो मात्रै सञ्चार माध्यममा दक्षिण कोरियाको काङ्नाम विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग सम्झौता गरेको ककुरा सुनें । यसभन्दा अगाडि त्यो विश्वविद्यालय धर्म प्रचारक विश्वविद्यालय हो भन्ने कुरा स्थापित भएको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्झौता रद्द गरेको थियो । मैले यो कस्तो विश्वविद्यालय रहेछ भनेर आज विहान काङ्नाम विश्वविद्यालयका बारेमा अध्ययन गरे । यो विश्वविद्यालयले क्रिश्चीयन धर्म प्रचार गर्नका लागि एउटा पादरीले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय हो भनेर भनेको छ । यो १९४६ मा स्थापना भएको रहेछ । यसको उद्देश्य नै यसले स्वर्गको पुजा गर्ने र क्रिश्चीयन धर्मको भावना अनुसार काम गर्ने भनेर लेखिएको छ । यस्तो विश्वविद्यालयलाई ल्याएर यहाँ सरकारको उच्च तहबाट संरक्षण दिने काम गरिएको छ , मैले यस्तो कुराको विरोधमा कुरा उठाँए भने आफुमात्र राष्ट्रवादी भयो भनेर कसैले तर्क दियो भने यो हास्यापद नभएर के हुन्छ ?
सिके राउत सच्चिएर आउने कुराको मैले विरोध गरेको होइन ।मेरो त्यतिबेलाका अन्तरवार्ताहरु सुन्नुभयो भने मैले सिके राउतले यदी नेपालको संविधान मान्छु र मैले पृथकतावाद त्यागें, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता मान्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो, उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भनेको छु मैले । तर मैले माग के गरेको छु भने सिके राउतले आजसम्म नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधिनताको अधिकारलाई मानेर मैले पृथकतावाद छोडें भनेर उहाँले अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन । सिके राउनको संगठन जुन अन्तराष्ट्रिय पृथकतावादी संगठनको सदस्य भएको थियो, त्यो सदस्यता अहिलेसम्म त्याग गरेको छैन, कतिपय मानिसहरुले उहाँले आफ्नो कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान गाउनु भयो भन्नुभयो, तर त्यही कार्यक्रममा सहभागी सिके राउतका कार्यकर्ताहरुले ‘हामीले किन गाउने राष्ट्रिय गान ? यस्ता हावादारी कुरा गर्ने पत्रकार’ भनेर खण्डन गरेका छन् । अनि उसले राष्ट्रिय गान नगाएको गायो, भनेर किन भन्नुप¥यो । यस्ता कुराहरु मैले उठाएको हुँ । दास्रो, सिके राउतको दर्शन एकदम ठुलो दर्शन हो भनेर त्यो मिल्दैन । किनभने सिके राउतको दर्शन भनेको हामीले नेपाल आमा भनेको ठाँउमा उहाँले ‘नेपाल बोक्सी’ भन्नुभएको छ । उहाँका सम्पुर्ण दश्तावेजहरु केही वर्ष अघि स्थायी कमिटीमा ल्याएर सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई जानकारी गराउने मान्छे म हुँ । त्यसैले उहाँले साँच्चिकै स्वच्छ ढंगले आउनुहुन्नछ, उहाँ नेपालको संविधान मानेर पृथकतावाद त्यागेर नेपालको अखण्डता, नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौसत्तालाई पुर्ण रुपमा स्विकार गरेर म आँए भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भने म पाि अहिले नै स्वागत गर्छु । तर उहाँले यो कुरा काँही भन्नुभएको छैन । उहाँले त्यो प्रतिवद्धता किन नजनाउने ? उहाँले त्यसो नभन्ने अनि सरकारले चाँही भव्य कार्यक्रम गरेर देशको कुनै अभियन्ता, महान् व्यक्ति आए जसरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने किन ? यो मिल्दैन यस्तो । कुनै पनि देशले यस्तो गर्दैन भन्ने कुरा मैले भनेको हुँ । अहिले पनि मेरो दृष्टिकोणमा म कायमै छु ।
म सबैभन्दा बढी जोड राष्ट्रिय हितमा दिन्छु । त्यो राष्ट्रिय हितको साधना गर्नको लागि यो देशलाई सत्तरी वर्षको लामो लडाँइ–संघर्ष पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । त्यसकारण स्थापना कालदेखि यो राष्ट्रको हितको लागि, जनताको जीवन स्तरलाई माथी उठाउनका लागि न्यायको लागि, समानताको लागि हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउनका लागि जुन हामीले संकल्प गर्दै आयौं, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले यो अवसरलाई राम्ररी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि जे जे भूमिका पार्टीले खेल भन्छ, कार्यकर्ता र जनताले खेल भन्छन् । देशले तेरो भुमिका आवश्यक छ भन्छ, म त्यसको लागि तयार छु । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा राष्ट्रको स्वार्थ, जनताको हित र पार्टीको आवश्यकता प्रतिविम्वीत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बेला बेलामा अनेक प्रकारका विवादका कुराहरु आएर पार्टी कमजोर हुने गरेको र अझ फुट्ने गरेको हामीले देखोका छौं । त्यसकारण अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा दुइवटा ठुला पार्टी एक हुँदाखेरी जे सहमति भएको थियो, हामी तदअनुकुल अगाडि बढ्नुपर्छ । र, हामीले विचारको कुरा गर्ने हो भने त्यतीबेला तत्कालिन नेकपा एमालेले अवलम्वन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले अवलम्वन गरेको एक्काएसौं शताव्दीको जनवाद भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसलाई हामीले महाधिवेशनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक वहशमा लैजाने तर अहिले त्तकाल हामीले उल्लेख गर्नुप¥यो भने जनताको वहुदलीय जनवाद भन्ने भन्ने कुरा सहमति गरेका थियौं र त्यसमा अहिले हाम्रा अध्यक्ष द्धोयले नै स्वयम् हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसकारण मैले यसलाई अनावश्यक रुपमा हामीले विवादको विषय बनाएर अझ पार्टीमा थप मतभेद छ की भन्ने खालको सन्देश उत्पन्न हुने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न । अहिले जे सहमति भएको छ, त्यसैमा अड्नुपर्छ र महाधिवेशनको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि हामीले पुर्व सहमतिका आधारमा सैद्धान्तिक वहशको ऋङ्खला चलाएर कुन सैद्धान्तिक मान्यतामा जाने हो, कस्तो कार्यक्रम अपनाएर अगाडि जाने हो, भन्ने कुरालाई त्यतीबेला छलफलबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ ।